IApartment 3, iLois Suite - I-Airbnb
IApartment 3, iLois Suite
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguJoshua
Ungarhoxa simahla ngaphambi kwe-25 Sep.
Emva kokugqiba ukulungiswa okugcweleyo kumgangatho we-2 weSakhiwo saseJones, siyavuya ukukunika i-suites ye-industrial style ye-4 kwi-Metropolis, IL.
Esakhiwa ngowe-1908, eso sakhiwo saseJones sasisakuba sisakhiwo seeofisi. Izitebhisi ezindala zibone i-traffic eninzi ekhokelela kuyo yonke into esuka kwiofisi yamazinyo, i-arhente ye-inshurensi kunye ne-3rd generation law firm. Ukubalula nje ezimbalwa. Le ndawo iye yavuselelwa kwaye yavunyelwa ukuba ikhule kwakhona. "UJones" ulungele ukukwamkela kwikhaya likaSuperman!
Ukuba imbali kunye nangaphandle zingaphezulu kwesitayile sakho sigubungele. Yenza "uJones" iziko lakho lomyalelo ngelixa usonwabela izinto ezintle zangaphandle. Ibekwe ngaphaya kwesitrato ukusuka kwiSitatimende esikhulu sikaSuperman kunye neMassac Country Courthouse. Esi sithuba simemayo sinekhitshi eligcweleyo elineetafile zesiko elibukhali, iindonga eziveziweyo zezitena, umbhobho wanamhlanje ojikelezayo kunye neefestile ezineentsimbi ezimnyama ezithe tye ezixhaswe ngamaplanga e-oki aneminyaka eli-100 ubudala. Uphuculo lubandakanya isantya esiphezulu se-intanethi engenazingcingo, iRoku t.v. kunye nezikhululo zokutshaja ezifanelekileyo. Zitshaje ngokutsha kwiibhedi zethu zobukhulu benkosi ngeeheadboards zamaplanga ezigciniweyo kunye neefestile ezigudileyo. Akukho zinkcukacha zishiywe ngaphandle, ukubandakanya imiyalezo emininzi yeshawari yentloko kwigumbi lokuhlambela elinamagumbi okuhlambela aneengcango zomthi ezityibilikayo. Yiza uzibonele ukuba i-"Jones" inokunikela ngantoni.
Iintsuku eziyi-7 e Metropolis
4.97 · Izimvo eziyi-34
Sicinga ukuba iSikhokelo seeNdwendwe zeMetropolis siyishwankathela ngcono: iMetropolis, IL, apho amaqhawe kunye nembali idibana khona elunxwemeni loMlambo iOhio.
Yehla kwibhloko ukuze ubone iivenkile ezikhethekileyo kunye neendawo zokutyela zasekhaya. Iindawo zabakhenkethi basekuhlaleni ziquka i-Illinois' First State Park; I-Fort Massac State Park, i-Casino yaseHarrah, i-15 Foot Superman Statue kunye neMyuziyam ePhambili, i-Mermet Lake State Fish and Wildlife Area kunye ne-Mermet Springs Scuba Facility. Yiza ubone ukuba yintoni ikhubalo ledolophu encinci elinokukunika.
Umbuki zindwendwe ngu- Joshua
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Metropolis